Nadwo si habsami leh uga socota Masjidka Al-Madiina ee magaalada Burco(Warbixin)
Burco:-Waxaa xalay oo bishu ahayd 31/01/2013 ka bilaamatay masaaajidka weyn ee jaamicu Madiina magaalada Burco ka bilaawday Nadwo loogu magacdaray ففروا إلي الله Nadwadan oo gashay sanadkeedii 3aad waxaa soo qaban qaabiyey Markiska Al-imaamu shaafici ee barashada culuunta islaamka, waxaana mushaarikayn doona nukhbatu minal culimaa oo ay kala yimi gobolada W/galbeed , Sool iyo Togdheer waxaana ka mid ah Culimadaas waaweyn
1-Sheekh Yuusuf Aadan.
Sheekh Maaxamed Cumar Dirir,
Sheekh Faysal cali Faarax.
Sheekh Ciise Maxamud C/llaahi
Sheekh Maxamuud Maxamed Xaliike,
Sheekh Cabdalla Daahir Baasha
Ugu horayn waxaa nadwadan Furitaankeeda ka soo qayb galay qaar ka tirsan Masuuliyiinta Gobolka togdheer Salaaddiin, Culimada Gobolka , iyo qaybaha kala duwan oo bulshada, waxayna dhamaatood aad ugu baraarijiyeen dadweynaha reer Burco inay fursadan qaaliga ah aad uga faa’iidaystaan.
Munaasabada awgeed waxaa muxaadaradii ugu horeysey oo ciwaankeedu ahaa U toobad keena Allah dhamaantiin halkaa ka soo jeediyey Sheekh Maxamuud Maxamed Xaliike oo si faahfaahsan uga hadlay baahida maanta loo qabo dadku inay Illaahay usoo noqdaan.
Sh, Maxamuud Xalliike ugu horayn wuxuu dadka xasuusiyey Nicmada Alle ku galadaystay Adoomihiisa ee isugu jirta mid muuqata iyo mid dahsoon labadaba ayna ugu weyn tahay Nicmatu Iimaan, taasoo u baahan garasho iyo mahadnaq laguna helayo kordhin loo kordhiyo nimcadaas ay ku sugan yihiin.
Muxaadaradan oo ka koobanayd 12 qaybood oo waaweyn oo ka turjumayey mowduuca muxaadarada waxaa ka mid ahaa sharaaxaad dheer oo uu Shiikh Maxamuud ka bixiyey Towbada ama usoo noqoshada Alle iyo mansilada ay ku lee dahay Shareecada Islaamka .
Waxaana kelmedihiisii ka mid ahaa “Towbadu waa denbiga oo laga hadho iyo Alle oo loo soo noqdo iyadoo wixii Alle ku farayna lala imaanayo wixii Alle kaa reebayna laga hadhayo. Towbadu waa rujuuc Alle iyo ka qoomamo laga qoomamoodo iyadoo qofku dareemayo weynida denbigiisa rajaynayana denbi dhaaf Alle.
Qaybta labad ee muxaadarada waxay ka hadleysey Makaanada ay Towbadu ku leedahay shareecada Islaamka towbaduna waa xaqiiqada islaamka ama mid shamilaysa islaanimada, dhamaan shareecaduna waxay soo hoos gelaysaa Towbada, waana tiir uu higsanayo ama uu higsanayo qof kasta oo islaama, dadka badankiisuna ma garanayaan martabada towbadda hadii aanay tawbadu ahayn mid islaamaka shamilysa Alle kuma farxeen tawbada adoonkiisa.
Wuxuu shiikhu kusoo koobay qaybta labaad hadalkii Sh Naasir alsacdi ee oo ku lahaa dadku waa laba mid Dulmiyey naftiisa xilkii la saarayna dayacay macaasina ku jira mana toobadkeenayo oo iyo kan labaad oo ah mid toobad keenay oo liibaanay.Waxaa kale oo uu ibnu qayim leeyahay; dadku waa taaib iyo daalim Taaibku waa ka ALle caabudaya ee u mahad naqaya u toobad keenaya xuduuda allena xafidaya.
Qaybta 3aad ee muxaadarada ayaa xukunka towbada iyo inay waajib tahay in Alle loo soo noqdo loona toobad keeno wuxuuna shiikhu sardiyey aayad iyo axaadiis badan oo ka hadlaya waajib nimada towbada iyo inay dadku ka faa’iideystaan jaaniska ay haystaan maadaaba ay toobadu ku xadidan tahay waqti oo aan la aqbalayn hadii ay naftu qarqarada soo gaadho iyo in an la aqbalayn towbada marka qoraxdu ay kasoo baxdo dhinaca Galbeed.
Intaas ka dib wuxuu skiikh Maxamuud ku tacqiibiyey qaybihii kale ee maxaadarad oo iyana ka kala hadlayey ka faa’iideysiga fursadaha lahaysto iyo ku halaagsamida u kaadsiinyaha loo kaadiyo in loo sugo towbada. Taasoo qofku denbiiile ku noqonayo dib u dhigida usoo noqoshada Alle.
Towbada in loo degdego waa waajib mana banaana in dib loodhigo hadiii uu denbiga ka toobad keeni waayo dib u dhigii uu towbada dib u dhigay waa denbi wayna yartahay inay dadka qalbigooda kusoo dhacdo.
Waxaa lagama maarmaana in towbadu ahaato mid nasuxa ah ay u dhan yihiin dhamaan shuruudaheedii kuwaasoo uu faahfaahiyey shardiyada ku xidhan towbada saxda ah ee Alle u aqbalayo adoonkiisana laga doonayo Alle wuu aqbalaa adoonka towbadiisa inataanay qaraqarada soo gaadhin.
Macaad ayaa rasuulka Alle ku yidhi iidardaaran wuuuna ku yidhi Rasuulku SCW ALle ka cabso , alena xus wixii aad samayso ee gef ah twbad ka daba keeno wixii qarsoodo ahaana—qardsoodi wixii muuqatana si muuqata. Qofkii wanaajiya wixi u hadhay cimrigiisa sida towbad ama camal saalica waa laga saamaxaa wicxi tagay Towbatu nasuuxa waa in denbi laga toobad keeno iyo inaan dib loogu noqon sida caanuhu aanay ugu noqonayn halkii ay ka yimaadeen.
Calaamadaha ay leedahay towbada saxda ah waxa ka mida midho dhal ama natiijo ka xasisha marka la aqbalo adoonka kana muuqata, Taasoo ka madhan wixi ku dheehmi karaya ama kugu dhawaynaya wixii aadka siibatay hanoqdeen denbigii ama dadkii ehelka u ahaa denbigaasba.
Waxaa kale uu uu shiikhu xusay Astaamaha towbada bacdigeed soo baxa inay ka mid tahay in qofku la yimaado wanaag sidii horena uu ka fiicnaado. iyo in qalbigagu la socdo cabsida Alle, iyo in markaad xasuusato aad ka qoomamooto wixii aaad hore u samayn jirtey. Waayo kuwa denbiga samaynaya ee aduunka jooga 3webi ayaa aduunka u yalaa oo ay iskudaahiriyaan haday kuwaasi ku filaan waayaan naarta ayaa ka daahirisa.
Ugu dabayn wuxuu shiikhu kusoo gunaanaday dardaaran dheer oo uu umada kula dardaarmayo inay toobada u degdegaan iyo inaan Denbiga la yaraysan, inuu kula weynaado denbiga ogowee Majiro denbi yari , iyo In xumaha la raaciyo camal suuban, iyo inaan In laga quusan raxmada aale
Xunuunka idin hayaa waa debi daawadiisuna waa denbi dhaaf Denbiyaduna waa dhaawcyo intee dhaawac qof u dhinatay wuxuuna kusoo xidhay dardaarankii ibnu baaz ee ahaa – waxaan kuu dardaarmayanaa toosnaana towbad iyo istiqfaar kuna bisharayso khayr iyo isllaax .
Halgan.net ayaa idiin soo gudbin doonta Muxaadaraadka nadwada xalay ka bilaabatay magaalada Burco gaar ahaan Masjidka Jaamica ee Madiina
February 1st, 2013 at 9:28 pm
walaalayaal waad ku mahadsan tihiin sida aad uga ha qabtiray saan bulshada wax yaalaha ay u baahan yihiin, gaar ahaan arimaha dacwada. MAHAD SANIDIIN